02.11.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– यो पुरुषोत्तम संगमयुग हो , पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ बनिरहेको छ , तिम ीले अब पुरुषार्थ गरेर उत्तम देव पद पाउनु छ।”
सेवाधारी बच्चाहरूको बुद्धिमा कुनचाहिँ कुरा सदा याद रहन्छ?
उनीहरूलाई याद रहन्छ– धन दिएर धन सकिँदैन... त्यसैले उनीहरूले रात-दिन निद्राको त्याग गरेर ज्ञान धनको दान गरिरहन्छन्, थाक्दैनन्। तर स्वयंमा कुनै अवगुण छ भने सेवा गर्ने उमंग पनि आउन सक्दैन।
प्यारा रूहानी बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन्– परमपिताले दिनहुँ सम्झाउनु हुन्छ, जसरी दिनहुँ टिचरले पढाउँछन्। पिताले त केवल शिक्षा दिन्छन्, ध्यान पनि दिइरहन्छन् किनकि घरमा नै बच्चाहरू रहन्छन्। माता-पिता साथमा रहन्छन्। यहाँ त यो अनौठो कुरा छ। रूहानी बाबाको पासमा तिमी बच्चाहरू रहन्छौ। एक त रूहानी बाबासँग मूलवतनमा रहन्छौ‚ फेरि कल्पमा एकैपटक बाबा आउनु हुन्छ– बच्चाहरूलाई वर्सा दिन वा पावन बनाउन, सुख वा शान्ति दिन। त्यसैले उहाँलाई अवश्य तल आएर रहनु पर्छ। यसमा नै मानिसहरू अलमलमा पर्छन्। गायन पनि छ– साधारण तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। अब साधारण तन कहींबाट उडेर त आउँदैन। अवश्य मनुष्य तनमा नै आउनु हुन्छ। त्यो पनि बताउनु हुन्छ– म यस तनमा प्रवेश गर्छु। तिमी बच्चाहरूले पनि अब बुझेका छौ– बाबा हामीलाई स्वर्गको वर्सा दिन आउनु भएको छ। अवश्य हामी लायक छैनौं, पतित बनेका छौं। सबैले भन्छन् पनि– हे पतित-पावन आउनुहोस्, आएर हामी पतितहरूलाई पावन बनाउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ– मलाई कल्प-कल्प पतितहरूलाई पावन गर्ने ड्युटी मिलेको छ। हे बच्चाहरू! अब यस पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनु छ। पुरानो दुनियाँलाई पतित, नयाँ दुनियाँलाई पावन भनिन्छ अर्थात् पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउन बाबा आउनु भएको छ। कलियुगलाई त कसैले पनि नयाँ दुनियाँ भन्दैन। यो त समझको कुरा हो नि। कलियुग हो पुरानो दुनियाँ। बाबा आउनु हुन्छ पनि अवश्य पुरानो र नयाँको संगममा। जहाँ सम्झाउँदा पनि भन– यो पुरुषोत्तम संगमयुग हो, बाबा आउनु भएको छ। सारा दुनियाँमा यस्तो कोही मनुष्य छैन जसलाई थाहा होस्– यो पुरुषोत्तम संगमयुग हो। अवश्य तिमी संगमयुगमा छौ त्यसैले त सम्झाउँछौ। मुख्य कुरा हो नै संगमयुगको। त्यसैले प्वाइन्टहरू सबै धेरै आवश्यक छन्। जुन कुरा अरू कसैले पनि जानेका छैनन्, त्यो सम्झाउनु पर्छ त्यसैले बाबाले भन्नु भएको थियो– यो अवश्य लेख्नु छ अहिले पुरुषोत्तम संगमयुग हो। नयाँ युग अर्थात् सत्ययुगको चित्र पनि छ। मनुष्यले कसरी बुझून् यी लक्ष्मी-नारायण सत्ययुगी नयाँ दुनियाँको मालिक हुन्। उनको चित्रको माथि पुरुषोत्तम संगमयुग पनि अवश्य हुनुपर्छ। यो अवश्य लेख्नु छ किनकि यो नै मुख्य कुरा हो। मनुष्यहरूले सम्झन्छन्– कलियुगको अवधि अझै धेरै वर्ष बाँकी छ। एकदम घोर अन्धकारमा छन्। त्यसैले सम्झाउनु पर्छ– नयाँ दुनियाँका मालिक यी लक्ष्मी-नारायण हुन्। यो हो पूरा निशानी। तिमीले भन्छौ– यस राज्यको स्थापना भइरहेको छ। गीत पनि छ– नवयुग आयो, अज्ञान निद्राबाट जाग। यो तिमीले जानेका छौ– अहिले यो संगमयुग हो, यसलाई नवयुग भनिदैन। संगमलाई संगमयुग नै भनिन्छ। यो हो पुरुषोत्तम संगमयुग जसमा पुरानो दुनियाँ खतम भएर नयाँ दुनियाँ स्थापना हुन्छ। मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौं, राजयोग सिकिरहेका छौं। देवताहरूमा पनि उत्तम पद हो यी लक्ष्मी-नारायणको। यी पनि हुन् त मनुष्य नै, यिनमा दैवी गुण छ त्यसैले देवी-देवता भनिन्छ। सबैभन्दा उत्तम गुण हो पवित्रताको त्यसैले त मनुष्यले देवताको अगाडि शिर झुकाउँछन्। यी सबै प्वाइन्ट बुद्धिमा धारण उनीहरूको हुन्छ, जसले सेवा गरिरहन्छन्। भनिन्छ– धन दिएर धन सकिँदैन। धेरै शिक्षा मिलिरहन्छ। ज्ञान त धेरै सहज छ। तर कसैमा धारणा राम्रो हुन्छ, कसैमा हुँदैन। जसमा अवगुण छ, उसले त सेन्टर सम्हाल्न पनि सक्दैन। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ– प्रदर्शनीमा पनि सीधा-सीधा शब्दमा सम्झाइदिनु पर्छ। पुरुषोत्तम संगमयुग त मुख्य रूपमा सम्झाउनु पर्छ। यस संगम युगमा आदि सनातन देवी-देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ। जब यो धर्म थियो तब अरू कुनै धर्म थिएन। यो जुन महाभारत लडाईं छ, त्यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। यो पनि अहिले निस्केको हो। पहिला कहाँ थियो र! १०० वर्ष भित्र सबै खतम हुन्छ। संगम युग कम्तिमा १०० वर्ष त हुनुपर्छ नि। सारा नयाँ दुनियाँ बन्नु छ। नयाँ दिल्ली बनाउन कति वर्ष लाग्यो।
तिमीले जानेका छौ– यहाँ नै नयाँ दुनियाँ हुन्छ, अनि पुरानो खतम हुन्छ। केही त रहन्छ नि। प्रलय त हुँदैन। यो सबै कुरा बुद्धिमा छ। अहिले हो संगमयुग। नयाँ दुनियाँमा अवश्य यी देवी-देवता थिए, फेरि यिनै हुन्छन्। यो हो राजयोगको पढाइ। यदि कसैले विस्तारमा सम्झाउन सक्दैन भने केवल एक कुरा भन– परमपिता परमात्मा जो सबैका पिता हुनुहुन्छ, उहाँलाई त सबैले याद गर्छन्। उहाँले हामी सबैलाई भन्नुहुन्छ– तिमी पतित बनिसकेका छौ। पुकार्छौ पनि– हे पतित-पावन आउनुहोस्। अवश्य कलियुगमा छन् पतित, सत्ययुगमा पावन हुन्छन्। अब परमपिता परमात्मा भन्नुहुन्छ– देह सहित यी सबै पतित सम्बन्ध छोडेर म एकलाई याद गर अनि पावन बन्छौ। यो गीताको नै शब्द हो। हो पनि गीताको युग। गीता संगमयुगमा नै गायन गरिएको थियो जब विनाश भएको थियो। बाबाले राजयोग सिकाउनु भएको थियो। राजाई स्थापना भएको थियो। फेरि अवश्य हुन्छ। यी सबै कुरा रूहानी बाबाले सम्झाउनु हुन्छ। ठीक छ मानौं, यस तनमा नआएर अरू कुनैमा पनि आउनु भयो। शिक्षा त बाबाको नै हो नि। मैले आफ्नो नाम त लिन्न। मैले त केवल बताउँछु, बाबा भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर्यौ भने तिमी पावन बनेर मेरो पासमा आउँछौ। कति सजिलो छ। केवल मलाई याद गर अनि ८४ को चक्रको ज्ञान बुद्धिमा होस्। जसले धारण गर्छ ऊ चक्रवर्ती राजा बन्छ। यो सन्देश त सबै धर्मको लागि हो। घर त सबै जानु पर्छ। मैले पनि घरको नै मार्ग बताउँछु। पादरी आदि जो भए पनि तिमीले उनलाई बाबाको सन्देश दिन सक्छौ। तिमीलाई धेरै खुसीको पारा चढ्नुपर्छ। परमपिता परमात्मा भन्नुहुन्छ– म एकलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। सबैलाई यही याद गराऊ। बाबाको सन्देश सुनाउनु नै नम्बरवन सेवा हो। गीताको युग पनि अहिले नै हो। बाबा आउनु भएको छ, त्यसैले यही चित्र सुरुमा राख्नुपर्छ। जसले सम्झन्छन्, हामीले बाबाको सन्देश दिन सक्छौं उनीहरू तयार रहनु पर्छ। दिलमा आउनु पर्छ– हामी पनि अन्धाको लठ्ठी बनौं। यो सन्देश त कसैलाई पनि दिन सक्छौ। बी.के. को नाम सुनेर नै डराउँछन्। भन, हामीले केवल बाबाको सन्देश दिन्छौं। परमपिता परमात्मा भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर, पुग्यो। हामीले कसैको ग्लानि गर्दैनौं। बाबा भन्नुहुन्छ– म एकलाई याद गर। म उच्च भन्दा उच्च पतित-पावन हुँ। मलाई याद गर्नाले तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। यो नोट गर। यो धेरै कामको चीज हो। हातमा वा बाहुमा शब्द लेखाउँछन् नि। यो कुरा पनि लेखिदेऊ। यति मात्र बतायो भने पनि रहमदिल, कल्याणकारी बन्छौ। आफैंसँग प्रण गर्नुपर्छ। सेवा अवश्य गर्नुपर्छ फेरि बानी पर्छ। यहाँ पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। चित्र दिन सक्छौ। यो हो सन्देश दिने चीज। लाखौं बाबाको बन्छन्। घर-घरमा गएर सन्देश दिनु छ। पैसा कसैले दिए पनि, नदिए पनि भन– बाबा त हुनुहुन्छ गरिब निवाज। हाम्रो कर्तव्य हो– घर-घरमा सन्देश दिनु। उहाँ हुनुहुन्छ बापदादा, उहाँबाट यो वर्सा मिल्छ। ८४ जन्म यिनले लिन्छन्। यिनको यो अन्तिम जन्म हो। हामी ब्राह्मण नै फेरि देवता बन्छौं। ब्रह्मा पनि ब्राह्मण हुन्। प्रजापिता ब्रह्मा एक्लै त हुँदैनन्। अवश्य ब्राह्मण वंशावली पनि हुनुपर्छ। ब्रह्मा नै विष्णु देवता, ब्राह्मण हुन् चोटी। उनै देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्छन्। कोही अवश्य आउँछन्, जसले तिम्रो कुरालाई बुझ्छन्। पुरुषले पनि सेवा गर्न सक्छन्। सबेरै उठेर मनुष्यले जब पसल खोल्छन् भने भन्छन्– सुबह का सांई.... तिमी पनि बिहान सबेरै गएर बाबाको सन्देश सुनाऊ। भन, तपाईंको धन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईले सांईलाई याद गर्नुभयो भने २१ जन्मको वर्सा मिल्छ। अमृतबेलाको समय राम्रो हुन्छ। आजकल कारखानामा महिलाहरूले पनि काम गर्छन्। यो ब्याज बनाउन पनि धेरै सहज छ।
तिमी बच्चाहरू त रात-दिन सेवामा लाग्नुपर्छ, निद्रा त्याग्नु पर्छ। बाबाको परिचय मिलेपछि मनुष्य सनाथ बन्छन्। तिमीले कसैलाई पनि सन्देश दिन सक्छौ। तिम्रो ज्ञान त धेरै उच्च छ। भन, हामीले त एकलाई याद गर्छौं। क्राइष्टको आत्मा पनि उहाँको बच्चा थिए। आत्माहरू त सबै उहाँका सन्तान हुन्। उही परमपिता परमात्माले भन्नुहुन्छ– अरू कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर। तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर म एकलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। मेरो पासमा आउँछौ। मानिसहरू पुरुषार्थ गर्छन् नै घर जानको लागि। तर कोही पनि जाँदैनन्। देखिन्छ– बच्चाहरू अहिले धेरै शिथिल छन्, त्यति मेहनत गरेका छैनन्, बहाना गरिरहन्छन्। यसमा धेरै सहन पनि गर्नुपर्छ। धर्म स्थापकले कति सहन गर्नुपर्छ। क्राइष्टको लागि पनि भनिन्छ– उनलाई क्रसमा चढाइयो। तिम्रो काम हो सबैलाई सन्देश दिनु। त्यसको लागि बाबाले युक्तिहरू बताइरहनु हुन्छ। कसैले सेवा गर्दैन भने बाबाले बुझ्नुहुन्छ, धारणा छैन। बाबा राय दिनुहुन्छ– कसरी सन्देश दिने। ट्रेनमा पनि तिमीले यो सन्देश दिँदै गर। तिमीलाई थाहा छ– हामी स्वर्गमा जान्छौं। कोही शान्तिधाममा पनि जान्छन् नि। मार्ग त तिमीले नै बताउन सक्छौ। तिमी ब्राह्मण नै जानुपर्छ। धेरै छन्। ब्राह्मणहरूलाई कहीं त राख्छन् नि। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान त अवश्य हुन्छन् नि। आरम्भमा हुन्छन् नै ब्राह्मण। तिमी ब्राह्मण हौ नै उच्च भन्दा उच्च। ती ब्राह्मण हुन् कोख वंशावली। ब्राह्मण त अवश्य हुनुपर्छ नि। नत्र प्रजापिताका बच्चा ब्राह्मणहरू कहाँ गए? ती ब्राह्मणहरूलाई त तिमीले सम्झाऊ, उनीहरूले तुरुन्तै बुझ्छन्। भन, तपाईं पनि ब्राह्मण हुनुहुन्छ, हामी पनि आफूलाई ब्राह्मण कहलाउँछौं। अब भन्नुहोस्– तपाईंको धर्म स्थापना गर्नेवाला को हुनुहुन्छ? ब्रह्मा बाहेक अरू कसैको नाम लिँदैनन्। तिमीले परीक्षण गरेर हेर। ब्राह्मणहरूका पनि ठूला-ठूला कुल हुन्छन्। पुजारी ब्राह्मण त धेरै छन्। अजमेरमा धेरै बच्चाहरू जान्छन्, तर कहिल्यै कसैले समाचार दिएनन्– हामीले ती ब्राह्मणहरूसँग भेट्यौं, उनीहरूसँग सोध्यौं– तपाईंको धर्म स्थापना गर्नेवाला को हुनुहुन्छ? ब्राह्मण धर्म कसले स्थापना गर्यो? तिमीलाई त थाहा छ, सच्चा ब्राह्मण को हुन्? तिमीले धेरैको कल्याण गर्न सक्छौ। यात्रामा भक्तहरू नै जान्छन्। यो लक्ष्मी-नारायणको चित्र त धेरै राम्रो छ। तिमीलाई थाहा छ– जगत अम्बा को हुन्? लक्ष्मी हो हुन्? यसप्रकार तिमीले नोकर, भिल्लिनी आदिलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। तिमीहरू सिवाय त अरू कोही छैनन् जसले सुनाउन्। धेरै दयालु बन्नुपर्छ। भन– तिमी पनि पावन बनेर पावन दुनियाँमा जान सक्छौ। आफूलाई आत्मा सम्झ, शिवबाबालाई याद गर। सोख धेरै हुनुपर्छ, कसैलाई पनि मार्ग बताउने। जो स्वयं याद गर्छन् उनीहरूले नै अरूलाई पनि याद गराउने पुरुषार्थ गर्नेछन्। बाबाले त गएर कुरा गर्नुहुन्न। यो त तिमी बच्चाहरूको काम हो। गरिबहरूको पनि कल्याण गर्नुपर्छ। विचराहरू धेरै सुखी हुन्छन्। अलिकति याद गरे भने पनि प्रजामा आउँछन्, त्यो पनि राम्रो हुन्छ। यो धर्मले त धेरै सुख दिन्छ। दिन-प्रतिदिन तिम्रो प्रत्यक्षता हुँदै जान्छ। सबैलाई यही सन्देश दिँदै जाऊ– आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। तिमी प्यारा बच्चाहरू पद्मापदम भाग्यशाली हौ। महिमा सुन्यौ भने सबै कुरा सम्झन्छौ, फेरि पनि कुनै कुराको चिन्ता आदि किन गर्छौ? यो हो गुप्त ज्ञान, गुप्त खुसी। तिमी हौ अज्ञात योद्धा। तिमीलाई अज्ञात योद्धा भनिन्छ। अरू कोही पनि अज्ञात योद्धा हुन सक्दैन। तिम्रो देलवाडा मन्दिर पूरा यादगार हो। दिल लिनेवालाको परिवारको हो नि। महावीर, महावीरनी र उनका सन्तान– यो पूरा-पूरा तीर्थ हो। काशी भन्दा पनि उच्च स्थान भयो। अच्छा!
१) घर-घरमा गएर बाबाको सन्देश दिनु छ। सेवा गर्ने प्रण गर, सेवाको लागि कुनै पनि बहाना नबनाऊ।
२) कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन, गुप्त खुसीमा रहनु छ। कुनै पनि देहधारीलाई याद गर्नु छैन। एक बाबाको यादमा रहनु छ।
परिस्थितिहरूलाई सौभाग्य सम्झेर आफ्नो निश्चयको फाउन्डेसनलाई मजबुत बनाउने अचल अडोल भव
कुनै पनि परिस्थिति आयो भने तिमीले हाई जम्प लगाऊ किनकि परिस्थिति आउनु पनि सौभाग्य हो। यो निश्चयको फाउन्डेसनलाई मजबुत बनाउने साधन हो। तिमी जब एकपटक अंगद समान मजबुत हुन्छौ अनि यी पेपरले पनि नमस्कार गर्नेछन्। पहिला विकराल रूपमा आउँछन्, अनि फेरि दासी बन्छन्। चुनौती देऊ म महावीर हुँ। जसरी पानीमा रेखा खिच्न सकिदैन, त्यस्तै म मास्टर सागरमाथि कुनै पनि परिस्थितिले आक्रमण गर्न सक्दैन। स्व-स्थितिमा रह्यौ भने अचल-अडोल बन्छौ।
ज्ञानी ऊ नै हो, जसको हर कर्म श्रेष्ठ र सफल हुन्छ।